Fivondronamben'ny Federasiona Ranomasimbe Indiana - ss 2t l0613 lar
Iraka tontosa tamim-pahombiazana
Alarobia 08 May
Rehefa avy novonjena tamin’ny fomba mahagaga toy izany i Jônà, ary nirahin’ Andriamanitra fanindroany ho any Ninive, dia nankatò tsy nisy hataka andro intsony izy. Tao anatin’ny fanambaràna nataony (Jônà 3:1–4), dia nampiasa fiteny mampahatsiahy ny nandravan’Andriamanitra an’i Sôdôma sy i Gômôra (Gen. 19) izy. Ny teny hebreo fototra nandikana ilay teny hoe “horavana” (jereo ny Gen. 19:21,29; Jônà 3:4) ao anatin’io fanambaràn’i Jônà io anefa dia azo adika ihany koa hoe “nihodina” na “voaova” (Eks. 7:17, 20; 1 Sam. 10:6). Tsy very maina ny fitorian’i Jônà ny hafatra avy tamin’ Andriamanitra.
Ny fibebahan’ilay tanàna no zava-bitan’i Jônà lehibe indrindra tamin’ny fanatanterahany ny asa naha-mpaminany azy. Taorian’ireo matilò, dia ny Ninivita no vondron’olona faharoa, tsy Hebreo, nitodika tamin’Andriamanitra ao amin’ny bokin’i Jônà, ary izany rehetra izany dia noho ny fifandraisana tamin’ity mpitondra hafatr’Andriamanitra tsy tanteraka ity. Tena nahatalanjona ny vokatry ny asa. Mba hampietrena ny tenany teo anatrehan’Andriamanitra, dia nitafy lamba fisaonana ireo Ninivita, nihosin-davenona hatramin’ny lohany, ary nifady hanina. Izany rehetra izany dia marika tety ivelany naneho alahelo sy fibebahana.
Vakio ny Mat. 12:39–41 sy 2 Tant. 36:15–17. Inona no ampianarin’ireo andininy ireo ny amin’ny maha-zava-dehibe ny fibebahana?
Fanakianana henjana ireo mpitarika maro feno avona teo amin’ny Isiraely sy ny vahoaka Isiraely - dia ireo izay nikiry nandà ny antson’ny mpaminany ho amin’ny fibebahana - ny ohatra mahatalanjona nasehon’ilay mpanjaka asirianina lehibe izay nampietry ny tenany tao anaty lavenona teo anatrehan’ Andriamanitra. Satria nanantitrantitra ny fahasoavana sy ny famelan-keloka avy amin’Andriamanitra ny bokin’i Jônà, dia mamaky izany isan-taona ny Jiosy amin’ny fotoana fara-tampony amin’ny Andro Fanavotana, izay ankalazana ny famelan’Andriamanitra ny helok’izy ireo.
“Andriamanitra mamindra fo sy miantra ny Andriamanitsika. Fahari-po sy fangorahana no itondrany ireo mpandika ny lalàny. Kanefa amin’izao androntsika izao, fotoana izay ananan’ny lehilahy sy ny vehivavy tombontsoa maro hifankazarana tsara amin’ny lalàn’Andriamanitra izay ambara ao amin’ny Soratra Masina, Ilay Mpanapaka lehibe izao tontolo rehetra izao dia tsy afaka ny ho afa-po mijery ireo tanàn-dehibe ratsy fanahy, anjakan’ny herisetra sy ny heloka bevava. Raha toa ka mibebaka ny vahoaka ao amin’ireny tanàn-dehibe ireny, tahaka izay nataon’ny mponin’i Ninive, dia ho maro ny hafatra tahaka ny an’i Jônà hotorina.” — The Advent Review and Sabbath Herald, EGW, 18 Oktôbra 1906.
Vakio ny Jônà 3:5–10. Inona no ambaran’ireo andininy ireo momba ny tena fibebahana marina? Fomba ahoana no ampiharantsika ireo fitsipika ireo amin’ny tenantsika manokana?